SKYPE ကိုအပေါ်တင်ပါတယ်မမွငျနိုငျအဘယ်ကြောင့် - SKYPE ကို - 2019
Skype ကိုပြဿနာ: အဘယ်သူမျှမကအခြားပါတီရဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်းမရှိ
အချို့ကိစ္စများတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာသို့စတဲ့ကင်မရာနှင့်အတူအခြားမည်သည့် gadget ကအပေါ်ကိုယူပုံ, orientation ကိုကြည့်ရှုရန်မသက်မသာဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြီးမားတဲ့-format နဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဒေါင်လိုက်အနေအထားနှင့်အပြန်အလှန်နိုင်ပါသည်။ ဤပြဿနာကိုများအတွက်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ဖြေရှင်းချက်များအတွက်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများမှကျေးဇူးတင်ပါသည် preinstalled ဆော့ဖျဝဲခြင်းမရှိဘဲပင်ဖြစ်နိုင်သည်။
အွန်လိုင်းဓါတ်ပုံလှည့်များ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်န်ဆောင်မှုများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားရှိပါတယ်။ သူတို့တွင်သည်အသုံးပြုသူများများ၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်ဖို့စီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတော်တော်များများက high-quality ဝက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်ကြသည်။
Method ကို 1: Inettools
ပုံရဲ့လည်ပတ်၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဘို့ A ကောင်းဆုံး option ကို။ အဆိုပါ site ကိုအရာဝတ္ထုနဲ့အလုပ်လုပ်နှင့်ဖိုင်များအဖြစ်ပြောင်းလဲဘို့အသုံးဝင်သော tool များကိုများစွာရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့က function ကိုလိုအပ်သောအရာကိုရှိပါသည် - အွန်လိုင်းဓါတ်ပုံလှည့်။ သင်တည်းဖြတ်ရန်မျိုးစုံဓာတ်ပုံများ upload တင်လို့ရပါတယ်, ကတပြင်လုံးကိုအထုပ်ပုံရိပ်တွေကိုဖွင့်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှု Inettools ကိုသွားပါ
ကြီးမားတဲ့ downloads, ကြည့်ရှုရန်ဝန်ဆောင်မှုပြတင်းပေါက်ဖို့အကူးအပြောင်းပြီးနောက်။ စာမကျြနှာကိုတိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်ပေးရန်ဖိုင်ကိုဖိဆွဲပါ, သို့မဟုတ်လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒေါင်းဖိုင်ကိုနှင့်ကလစ်ကို Select လုပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
နိဒါန်းထောင့်တန်ဖိုးများကို manually (1);
တန်ဖိုးများ (2) နှင့်အတူကိုပြင်ဆင် Templates ကို;
လည်ပတ်၏ထောင့်ကိုပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် slider ကို (3) ။
လိုချင်သောဒီဂရီတွန်းအားပေး button ကိုရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက် "လှည့်".
အချောပုံရိပ်ကိုဝင်းဒိုးအသစ်တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Download ပြုလုပ်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ "ဒေါင်းလုပ်".
ဖိုင်ကို browser ကိုအားဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင် site ကိုသင့်ဆာဗာပေါ်တွင်သင်၏ပုံရိပ်သက်ရောက်နှင့်သင့်အား link တစ်ခုပေးသည်။
Method ကို 2: Croper
ယေဘုယျအားဖြင့်ပုံရိပ်တွေ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အ Excellent ကဝန်ဆောင်မှု။ အဆိုပါ site ကို, တည်းဖြတ်သက်ရောက်မှုလျှောက်ထားနဲ့တခြားလုပ်ငန်းလည်ပတ်လုပ်ဆောင်ရေးကိရိယာများနှင့်အတူအများအပြားကဏ္ဍများရှိပါတယ်။ လှည့် function ကိုသင်အလိုရှိသောထောင့်မှပုံသဏ်ဌာနျကိုလှည့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ယခင်နည်းလမ်းအတွက်ကြောင့်အများအပြားအရာဝတ္ထု load နှင့် process မှဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုက် control panel ကိုထိပ်တွင် tab ကို select လုပ်ပါ "ဖိုင်များ" အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပုံရိပ်ကိုအပ်လုဒ်ကိုနည်းလမ်း။
အဆိုပါ disk ကိုရွေးချယ်မှုကနေဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့ဆိုက်သစ်ကိုစာမကျြနှာကိုအ redirect ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ button ကိုနှိပ် "ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို Select လုပ်ပါ".
နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက် image file ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ရုပ်ပုံနှင့်စာနယ်ဇင်းကို select "ပွင့်လင်း".
အောင်မြင်သောရွေးချယ်ရေးပြီးနောက်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ "ဒေါင်းလုပ်" အနည်းငယ်နိမ့်။
သင်သည်ထိုသူတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျက်ပစ်သည်အထိတင်ထားသောဖိုင်များကိုလက်ဝဲ pane ထဲကထဲမှာသိမ်းထားတဲ့လိမ့်မည်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပုံပေါ်သည်:
အောင်မြင်သောအထက် menu ကိုရှေးခယျြစရာအကိုင်းအခက်ဖြတ်သန်း: "စစ်ဆင်ရေး"ထိုအခါ "Edit ကို" နှင့်နောက်ဆုံးတွင် "လှည့်".
ထိပ်မှာ4ခလုတ်ရှိပါတယ်: အလှည့် 90 ဒီဂရီအဖြစ်ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိနေကြရသောတန်ဖိုးများနှစ်ဖက်အားဖြင့်ညာဘက်ကိုဖွင့်, 90 ဒီဂရီထားခဲ့တယ်။ သငျသညျအဆင်သင့်လုပ် template ကို fit လျှင်, ညာဘက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သငျသညျအခြို့ဒီဂရီဖို့ image ကိုလှည့်ဖို့လိုအပ်သည့်အခါသို့သော်, (လက်ျာဘက်သို့မဟုတ်လက်ဝဲ) ကိုခလုတ်များ၏တဦးတည်းအတွက်တန်ဖိုးရိုက်ထည့်ပါကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အချောရုပ်ပုံများသိမ်းဆည်းရန်မီနူးကို item ပေါ်တွင် mouse ကိုနေရာချ "ဖိုင်များ"ထို့နောက်တပ်မက်လိုချင်သောအ method ကို select လုပ်ပါ: ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထား, တစ်လူမှုကွန်ယက် VKontakte သို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံကို sharing ဆိုက်အတွက်ပေးပို့ပါ။
သီးခြားဖိုင်နဲ့ archive ကို: တစ် PC ကို hard disk space ကိုအပ်လုဒ်တင်ခြင်း၏စံနည်းလမ်းမှာ, သင်2options များ download လုပ်ပါသတိပေးခံရလိမ့်မည်။ တခါမှာအတော်ကြာပုံရိပ်တွေ၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်နောက်ဆုံးသက်ဆိုင်ရာ။ loading ချက်ချင်းလိုချင်သောနည်းလမ်း၏ရွေးချယ်ရေးပြီးနောက်ရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။
Method ကို 3: IMGonline
ဒီ website အခြားအွန်လိုင်းဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေးအပြင် image ကိုလှည့်ပါက, convert, အကျိုးသက်ရောက်မှုများလျှောက်ထားရန်ချုံ့နိုင်သမျှဖြစ်ပြီး, တည်းဖြတ်ရေးအတွက်အခြားအသုံးဝင်သော features တွေ။ Duration: ဓါတ်ပုံကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ 0.5 ကနေ 20 စက္ကန့်အထိဖြစ်နိုင်တယ်။ ရုပ်ပုံလှည့်သည့်အခါကပိုပြီးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနည်းလမ်းကိုအထက်ဆွေးနွေးကြသည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်ကိုပိုမိုအဆင့်မြင့်သည်။
အဆိုပါ site ကိုမှသွားပြီးကလစ်နှိပ်ပါ "File ကိုရွေးချယ်ပါ".
သင့် hard drive ကိုနှင့်ကလစ်အပေါ်ဖိုင်တွေကိုအကြားပုံကိုရွေးချယ်ပါ "ပွင့်လင်း".
သင့်ရဲ့ image ကိုလှည့်ချင်သောဒီဂရီ၏တန်ဖိုးရိုက်ထည့်ပါ။ တစ်ဦးပုံရှေ့မှာမအနုတ်ဝင်လျှင်တန်ပြန်လက်ယာရစ်ဦးတည်ချက်ပြည့်စုံစေနိုင်သည်ပါ။
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဦးစားပေးများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဓာတ်ပုံကိုလှည့်အဖြစ်ရွေးချယ်စရာကို set up ပစ်မှတ်အပေါ်မှီခို။
ပြီးနောက်သင်လွတ်မြောက်လာနောက်ခံ၏အရောင်ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်, သငျသညျဒီဂရီများ၏အရေအတွက်ကိုဖွင့်ပါက image ကို 90 ဖွငျ့စားလို့ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးသတိပြုပါ။ ကြီးမြတ်သောအတိုင်းအတာအထိပြုလုပ် JPG file တွေကိုစိုးရိမ်။ ဒီအလုပျစံကနေချောအရောင်ကိုရွေးပါသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင် hex-စားပွဲပေါ်မှာကနေ code ကိုရိုက်ထည့်ပါရန်။
hex-အရောင်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း Palette".
ကယျတငျခွငျးအဘို့အလိုချင်သောပုံစံကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက်လွတ်မြောက်ဧရိယာပွင့်လင်းပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်လည်ပတ်၏ဒီဂရီ၏တန်ဖိုး image ကို 90 တစ်မျိုးစုံမဟုတ်ခဲ့လျှင်ကျနော်တို့, PNG ၏အသုံးပြုမှုကိုအကြံပြုပါသည်။ format တစ်ခုရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက်သင် metadata ကိုနှင့် checkbox ကို check လုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်။
အားလုံးလိုအပ်သော parameters တွေကို setting ပြီးနောက် button ကို click "အိုကေ".
သစ်တစ်ခု tab မှာလုပ်ငန်းများ၌ဖိုင်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဟုအဆိုပါလုပ်ငန်းများ၌ image ကိုဖွင့်ပါ".
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ hard drive ကို, သတင်းစာပေါ်ဓါတ်ပုံတွေကို load လုပ်ဖို့ "ဟုအဆိုပါလုပ်ငန်းများ၌ image ကို Download လုပ်ပါ".
Method ကို 4: Image ကို-Rotate
လူအပေါင်းတို့၏ပုံရိပ်ကိုလှည့်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးဝန်ဆောင်မှု။ download, လှည့်, ကယ်တင်: လိုချင်သောရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်က3ခြေလှမ်းများလုပ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ အပိုဆောင်း tools များနှင့်အင်္ဂါရပ်ပြဿနာသာဖြေရှင်းချက်မရှိပါ။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို Image-Rotate ကိုသွားပါ
အိမ်စာမကျြနှာပျေါတှငျ box ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Rotate ဓာတ်ပုံများ» ဒါမှမဟုတ်ဖိုင်ကိုင်တွယ်ရန်ကလွှဲပြောင်း။
သင်ပထမဦးဆုံး option ကိုရွေးချယ်ပါက, ထို့နောက်သင့်ရဲ့ PC ကို၏ disk ပေါ်မှ file ကို select လုပ်ပါ, အဲဒီနောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
အဆိုပါ counterclockwise ဦးတည်ချက် (1) တွင် 90 ဒီဂရီ၏ပုံရိပ်ကိုလည်ပတ်;
အဆိုပါလက်ယာရစ်ဦးတည်ချက် (2) 90 ဒီဂရီ၏ပုံရိပ်ကိုလည်ပတ်။
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ချောအလုပ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် Download "ဒေါင်းလုပ်".
အွန်လိုင်းပုံတစ်ပုံကိုလှည့်များ၏ဖြစ်စဉ်ကိုသငျသညျ 90 ဒီဂရီသာ image ကိုလှည့်ချင်အထူးသဖြင့်လျှင်, အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ ဆောင်းပါးထဲမှာန်ဆောင်မှုတွေထဲမှာအဓိကအားဖြင့်ဓာတ်ပုံကိုအပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့များစွာသော features တွေ၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူဆိုဒ်များ featured, ဒါပေမယ့်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အခွင့်အလမ်းများဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအင်တာနက် access ကိုအဘယ်သူမျှမနှင့်အတူပုံတစ်ပုံလှည့်ချင်လျှင်, သင်ထိုကဲ့သို့သော Paint.NET သို့မဟုတ် Adobe က Photostop အဖြစ်အထူးဆော့ဖ်ဝဲ, လိုအပ်ပါတယ်။